Mutongi weDare rePamusoro Anoti Achapa Mutongo Wake paNyaya yeMagwaro eKuvhotesa eBraille
Chivabvu 24, 2018
Vasingaoni vanoti vari kuda kuti magwaro ekuvhotesa ange akanyorwa neBraille
Mutongi wedare repamusoro, VaCharles Hungwe, neChitatu vakati vachatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara panyaya yakakwidzwa kudare iri naVaAbraham Mateta, vachida kuti dare rimanikidze ZEC kudhinda magwaro ekuvhotesa anoshandiswa nevasingaoni erudzi rwe braille.
Vasingaoni vanoti kana magwaro ekuvhotesa musarudzo dzegore rino akange aine runyoro rwemapundu kana kuti braille, zvinozovaitira nyore pakuvhota musarudzo idzi uye pavanenge vavhotera hapazozivikanwe chero nani zvake.
Vachisvitsa chikumbiro ichi mudare reHigh Court, rimwe gweta rakamirira vasingaone panyaya iyi, VaJustice Mavedzenge, vakaudza dare kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, inosungirwa kutevedza bumbiro remitemo iro rinoisungira kuti iite zvose zvinodikanwa kuti veruzhinji vavhote zvakasununguka uye pavanenge vavhotera pasazivikanwe.
Vakaenderera mberi vachiti zvinoshamisa kuti ZEC haisati yaita kana chinhu chimwe zvacho chinoratidza kuti yakazvipira kutevedzera bumbiro remitemo makore mashanu bumbiro idzva rapasiswa, panyaya yekugadzirisa zvinodikanwa nevanhu vasingaone kuti vakwanise kuvhota vakasununguka uye vasingazivikanwe kuti vavhotera papi.
VaMavedzenge vakaudza mutongi wedare repamusoro kuti zvakakosha kuti vasingaone vapihwe mapepa ekuvhotesa ane runyoro rwemapundu kana kuti braille rwavanokwanisa kuverenga zvinozoita kuti vasazobatsirwa nevamwe vanhu sezvinotaurwa nemutemo unoona nezvesarudzo.
Mutemo wesarudzo unoti vasingakwanise kuverenga kana vasingaone vanogona kubatsirwa kuvhota pachishandiswa mapurisa, vana muzvinahofisi vanoona nezvekuvhotesa kana munhu anenge asarudzwa nemunhu anenge asingaoni kuti amubatsire pakuvhota.
VaMavedzenge vanoti kana ZEC ikaburitsa magwaro ekuvhotesa ane runyoro rwe braille zvinoitira nyore vasingaone pakuvhota uye pavanenge vavhotera hapazozivikanwe kana nani zvake.
Rimwe remagweta ari kushanda pamwe chete naVaMavedzenge panyaya iyi, VaInnocent Maja, vakati zvakakosha kuti bumbiro remitemo ritevedzwere neZEC kuitira kuti kodzero dzevasingaone dzisatyorwe munguva yesarudzo.
VaMaja, avo vanove zvakare mukuru wezvidzidzo zvemitemo paUniversity of Zimbabwe, vakati hazvidhure uye hazvitore nguva kuti magwaro ekuvhotesa aiswe murunyoro rwe braille.
Zvichakadai, gweta reZEC, VaTawanda Kanengoni vakapikisa chikumbiro chakasvitswa kudare vachiti kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti kodzero dzevasingaone dzinofanira kuchengetedzwa, komisheni yavo haina mari yekugadzira gwaro rekuvhotesa rine runyoro rwe braille.
VaKanengoni vakatiwo sekomisheni mawoko avo akasungwa nemutemo unoona nezvesarudzo uyo unotiwo magwaro ekuvhotesa anofanira kunge akadhindwa uye aine mifananidzo yevanhu vanenge vachivhoterwa zvavanoti zvinogona kutadzika kuti mifananidzo iyi ibude murunyoro rwe braille.
Muchikumbiro chavakasvitsa kudare ichi, VaMavedzenge, avo vakange vakamirira vasingaone, vakati vanodawo zvakare kuti gurukota rezvemitemo pamwe nemuchuchisi mukuru wehurumende vaone kuti paumbwa mutemo unokoshesa zvido zvevasingaone munguva dzesarudzo gore rino risati rapera.
Asi gweta rakanga rakamirira hurumende panyaya iyi, Amai Fortune Chimbaru vakati hurumende haione izvi sezvakakosha sezvo vachiti mitemo iripo pari zvino inoita kuti vasingaone vakwanise kuvhota zvakasununguka.